Amanyathelo ama-5 aSisiseko okuQala ukwakha uLuhlu lwakho lwe-imeyile | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 17, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Enye yeendlela ezilula zokuqinisekisa ukuba yakho ukuhanjiswa kwee-imeyile ihlala ime kakuhle-ethetha ukuba i-imeyile yakho iyenza kwi-inbox, hayi ifolda ye-junk, kukuba nendlela ekhuselekileyo necacileyo yokuqokelela iidilesi ze-imeyile. Nantoni na engaphandle kwefom yokungena ngokucacileyo inxibelelana nomnikelo kwaye iseta ulindelo kwimirhumo (ibonakaliswe vs echaziweyo imvume) inokuchaphazela amathuba okuba umamkeli anokucofa iqhosha le-SPAM. Kwaye xa besenza, inokuchaphazela amandla akho okufumana ii-imeyile kwibhokisi engenayo yabo bonke abanye ababhalisile.
Ingabonakala ngathi kukwakha uluhlu lokungena okokoko kungoyena msebenzi unzima, kodwa kunyanzelekile. Xa usakha uluhlu ngokuchanekileyo, uya kuba nabaphulaphuli abathinjiweyo abakulungeleyo ukuva into oza kuyithetha. Nazi iindlela ezi-5 ezilula eziyimishini yoqobo yokwakha uluhlu lwababhalisi abathembekileyo. Funda inqaku elipheleleyo Apha.
I-imeyile ithunyelwe yinkampani yokubonelela ngokuhanjiswa. Sabelane ngetoni yolwazi malunga nokuziswa apha Martech Zone -Uqiniseke ukuba ujonge eyethu abaxhasi kwi250ok ukuba ungathanda izixhobo ezipheleleyo zokukunceda nawe! Esi sisiseko esomeleleyo samanyathelo ama-5 ekufuneka ibe sisiseko sayo yonke iwebhusayithi kunye nenkqubo yentengiso ekwi-Intanethi- ukukwazi ukungena ngokulula kubhalisi onokuthi unxibelelane nabo rhoqo ngenjongo yokukhulisa ubudlelwane beshishini kwixa elizayo.
Isitshixo sokuQala ukwakha uLuhlu lwakho lwe-imeyile
Umxholo ophambili xa ukhetha ukungena kufuneka ibe kukufumanisa ukuba yintoni ephazamisa ithemba lakho, banike into yokusombulula ingxaki kwaye emva koko bahambise ixabiso lokwenyani ngenkqubo ye-imeyile ukuze uqhubeke nokwakha ubudlelwane.
Chonga into abayifunayo kwaye babarhwebeshe ekubeni bangene kurhwebo ... umrhumo wabo we-goodie.
dala iphepha lokufika elinesihloko esifutshane kunye nesithembiso.
Yongeza ifom eya kuqokelela idilesi ye-imeyile kunye nolwazi olongezelelweyo.
uvavanyo ifom yakho! Sisebenze nabathengi abaninzi abangazange bavavanye ifom yabo ngaphandle… kwaye baphukile!
Ukuqhuba ukugcwala kunye nokulandela umkhondo woguqulo lwakho ukumisela ixabiso lababhalisi bakho kunye nenqanaba labo lokuguqula.
Elinye icebo elibambe liyinyani… sukunika nje i-goodie yakho ngokungenisa ifom. Qiniseka ukuba imeyile i-goodie, ngaloo ndlela uya kuqinisekisa ukuba umntu usebenzise idilesi ye-imeyile efanelekileyo! Nje ukuba inkqubo ye-imeyile ibe neziseko, nazi Iindlela ezili-15 zokukhulisa uluhlu lwakho lwe-imeyile!
tags: uluhlu lwe imeyileukungena kwe-imeyileimeyile rhumaemail ubhalise ifomUmrhumo we-imeyilekhulisa uluhlu lwakho lwe-imeyilekhulisa uluhlu lwakhokhulisa uluhlu lwakho lwababhalisiNikela iifom ezifanelekileyoifomu yomrhumoUluhlu lwababhalisi
Izizathu zokuba umphathi wakho makabe kwiiMidiya zoLuntu